မောင်ရင်ငတေ ** MAUNGYINNGATAY **** မောင်ရင်ငတေ ***: ဥရောပနာရီ နွေနာရီ Heure d'été (Daylight Saving Time)
မောင်ရင်ငတေ ရေးချင်သမျှသော စကားလုံးများကို ရေးချင်သလို ရေးချထားတာပါ၊ ရင်ထဲက အတွေးစများ နှစ်ဆယ်ကျော် အလွမ်းစာများ ငါ့ ရင်ထဲက ဧရာဝတီ အလွမ်းစာများ ကျောက်ဖရား သောင်ရင်းမှသည် မယ့်ခေါင်စာစုများ သောင်ရင်း သံလွင် စစ်တောင်းမှ ဧရာဝတီသို့ စာစုများ စကားလုံးကဗျာ အပိုင်းအစများ လက်ရှိ နေထိုင်ရာ ပါရီပုံရိပ်များ ပါရီမြို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသူများ ဥရောပ ရှန်ဂန်ဧရိယာ ခရီးမှတ်တမ်းပုံရိပ်များ ခရီးသွားခြင်းအနုပညာ ***** ***** ** တွေကို စိတ်ထဲ ခံစားမိသမျှ ဖီလင်လာသမျှ ရေးပါတယ်။
Je t’aime (Pictures) (1)
Restaurant Chez Moi (2)
ခင်ဝမ်းနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (5)
ခရီးသွားခြင်း အနုပညာ (51)
ဂူဂဲလ်မြေပုံပေါ်ရောက် မှတ်တမ်းပုံများ (4)
ငါ့ ရင်ထဲမှာ ဧရာဝတီ (7)
ဒွိုက်ခ်ျလန်း သို့မဟုတ် ဂျာမဏီ (1)
ပါရီ Je t’aime (Pictures) (3)
ပါရီ-ရှန်ဂန် အစုန်အဆန် (19)
ပါရီရယ် ပြင်သစ်ရယ် (8)
ဗန်ဂိုးရဲ့ အရုပ်အရိပ်အရောင်များ (10)
မှတ်တမ်းပုံရိပ် စာစုများ (1)
မှတ်တမ်းပုံရိပ် ဗွီဒီယိုများ (2)
ပြင်သစ်တခွင် ပုံရိပ်များ (5)
ပြင်သစ်အရှေ့ဖျားက “ဆွစ်-ဂျာမန်”တို့ ဆုံရာမြေ (1)
သဘာဝရဲ့ အလှတရားများ (1)
သမိုင်းထဲက နာမည်ကျော်များ (2)
အီတဲလစ်ကျွန်းဆွယ် တောင်ပိုင်းမြေသို့ (1)
ကျောက်ဖရား သောင်ရင်း မှသည် မယ့်ခေါင် ဆီသို့ (17)
ကျောက်ဖရား သောင်ရင်း ဧရာဝတီ ပုံရိပ်များ (4)
ငွေမှင်ရောင် ဖရန့်အတ္တလန်တစ် ကမ်းခြေများ (2)
ဆေးရောင်စုံ .. …. မြင်ကွင်းကျယ် . .. (1)
နော်မန်ဒီ ကမ်းခြေ (3)
နော်မန်ဒီ ဘရစ်တနီ ကမ်းခြေများ (2)
ပေါ်တို လိစ်ဘိုဝါမှတဆင့် မာဒရစ်ဆီသို့ (6)
ဘေအာဘေ (BAB) (8)
မောင်ရင်ငတေ စာစုများ (ပီဒီအက်ဖ်) (3)
မြောက်ပင်လယ်က တောင်မရှိတဲ့တိုင်းပြည် (5)
လေယာဉ်စီး၍ ခရီးနှင်မယ် (1)
သောင်ရင်း သံလွင် စစ်တောင်းမှ ဧရာဝတီသို့ (7)
* ** မောင်ရင်ငတေနေတဲ့ မြို့အကြောင်း ** *
* ** ငါမရှိတော့တဲ့နောက် * **
ဗန်ဂိုးရဲ့ အရုပ်အရိပ်အရောင်များ ** ဗန်ဂိုးရဲ့နောက်...
အတွေးစတစ ** အမာထည် အသည်းနှလုံးများ
ကဗျာ ** GOLDEN PLUS ONE ငါးဆယ်အပေါင်းတစ်
** ဗမာစာကိုလွမ်း * **
မီနီဘိုင်အို အပိုင်း (ငါး) ရေနံ့သာမှ ထီလာမြေသို့...
** ဘီကေကေက တခုသော အခန်းငယ်လေး ** *
** IVRY ** *
** ရွှေဝါရောင် ဆီထွက်သီးနှံ ** *
** ပါရီမြို့က မြေအောက်ရထားအကြောင်း ** *
ခံစားမှုစိတ် ** တိုင်းပြည်
ရှစ်လေးလုံး ကွယ်လွန်ခြင်း (၈ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
** စပျစ်သီးခူးသမား * **
ကဗျာ ** စုန်းပြူး
* ** စပျစ်ဝိုင်နယ်မြေများကို ဖြတ်သန်းခြင်း ** *
* ** Concorde ကွန်းကော့ဒ် အမည်ရ Obélisque de Louxo...
ကဗျာ ** သေမင်းဆီသို့ ခြေလှမ်းသုံးဆယ်
ဗန်ဂိုးနဲ့ နျူနန်နယ်မှ အာလူးစားသူများ
ဥရောပနာရီ နွေနာရီ Heure d'été (Daylight Saving Time)
ပန်းချီဆရာ ဗန်ဂိုး ၁၆၂ နှစ်ပြည့်
ပါရီပုံရိပ်များ ** ကမ္ဘာတလွှားအီဖယ်များ (တစ်)
ပါရီပုံရိပ်များ ** ကမ္ဘာတလွှားအီဖယ်များ (နှစ်)
ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ မတ်လ နောက်ဆုံးပတ်ရဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဒီကနေ့ အခု တနာရီ ရှေ့တိုးသွားပါပြီ၊
အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ နာရီတွေမှာ မနက် နှစ်နာရီက မနက် သုံးနာရီ ဖြစ်သွားပါပြီ၊
လက်ပတ်နာရီ တိုင်ကပ်နာရီလို အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်မထားတဲ့ နာရီတွေ ရှေ့သို့ တနာရီ တိုးရမယ့် အချိန်ပါ၊
ရထားစီး ကားစီး ခရီးသွားသူများ သတိပြုရန်ပါ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ အများစု ကျောင်းပိတ် ရုံးပိတ် အလုပ်ပိတ်ရက်ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊
ဥရောပမှာ ဒီလိုမျိုး တနှစ်ကို နှစ်ခါ ပြောင်းပါတယ်၊ နွေဦးရာသီ မတ်လရဲ့ နောက်ဆုံး တနင်္ဂနွေ မနက်ကြီး နှစ်နာရီမှာ ရှေ့ကို တနာရီ တိုးတာဖြစ်ပြီး ဆောင်းဦးရာသီ အောက်တိုဘာလရဲ့ နောက်ဆုံး တနင်္ဂနွေမှာ နောက်ကို တနာရီ ဆုတ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊
အမေရိကန်တို့ သြစတြေးလျှားတို့မှာတော့ ဒီလို နာရီ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်တာမျိုး ရှိပေမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့ရက် မတူပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒီလို အချိန်နာရီကို ပြောင်းရခြင်းက နေဝင် နေထွက်ချိန် မတူညီကြတဲ့ နိုင်ငံတွေကို တညီတညာတည်း စံတော်ချိန် တူညီအောင် သတ်မှတ် ထားခြင်းကြောင့် နေဝင်စော နေထွက်စော ကွာခြားမှုကို ကျဉ်းမြောင်းသွားအောင် ကြံဆသတ်မှတ် ခဲ့ကြခြင်းကနေ Heure d'été (Daylight Saving Time) ဆိုပြီး ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊
ဥပမာအားဖြင့် ဆိုရရင် ပြင်သစ်ပြည်နဲ့ မြန်မာပြည် အချိန်ကွာခြားချက်အရ ဆောင်းရာသီမှာ ငါးနာရီခွဲ ကွာပြီး နွေရာသီမှာတော့ လေးနာရီခွဲ ကွာတာပါ၊ ဒီကနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မြန်မာပြည်မှာ နေမွန်းတည့်ချိန်ကျော်ပြီး နာရီပြန် နှစ်ချက်တီး နေ့လည် ၂ နာရီတိတိ ရွှေပြည်တော်သားတွေ ထမင်းစားပြီး တရေးတမောအိပ်ချိန်မှာ ပြင်သစ်ပြည်က မောင်ရင်ငတေတို့ကတော့ အလုပ်မရှိလို့ မနက်ကြီး ကိုးနှစ်နာရီခွဲ အိပ်ယာထဲမှာ ကွေးလို့ကောင်း နေတုန်းပါ ခင်ဗျာ၊
à mars 27, 2015
Libellés : ပါရီရယ် ပြင်သစ်ရယ်
MaungYin NgaTay MickyNaing
မောင်ရင်ငတေ စိတ်ထဲရှိသမျှ ရေးချင်သမျှသော စကားလုံးများ
ကာတာ ဒိုဟာမှသည် ဘီကေကေ
ဘီကေကေ ကောင်းကင်သို့ စာစု (၁) ကာတာ ဒိုဟာမှသည် ဘီကေကေ မကြာခင် ပေါ်လာမယ့် Boeing 777-9X-10X-11X Airbus A350-1000-1500-2000-3000 တို့လိုေ...
** * စပျစ်ဝိုင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု * **
စပျစ်ဝိုင် စပျစ်ဝိုင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု ** ဘဝထဲကလူသား ** * စပျစ်သီးခူးသမား ** * စာစုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ( နှစ် ) ရှန်ပိန် ဝိုင် နဲ့...
** လူဝီဗီတွန် (သို့မဟုတ်) မိတ်အင်ပြင်သစ် ခရီးဆောင်သေတ္တာ အကြောင်း ** *
ဘဝထဲကလူသား လူဝီဗီတွန် (သို့မဟုတ်) မိတ်အင်ပြင်သစ် ခရီးဆောင်သေတ္တာ အကြောင်းေ...
ပါရီပုံရိပ်များ စာစု (တစ်) မောင်ရင်ငတေနေတဲ့ မြို့အကြောင်း (ပါရီမြို့ကို လွမ်းကြသူများ) ပဲရစ် (သို့မဟုတ်) ပါရီ မောင်ရ...
* ** ကာတာ ဒိုဟာမှသည် ဘီကေကေ ** *
ကျောက်ဖရား သောင်ရင်း မှသည် မယ့်ခေါင် ဆီသို့ ကာတာ ဒိုဟာမှသည် ဘီကေကေ (ဘီကေကေ အစုန်အဆန်) ကီလိုချိန် နှစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းခွ...
စပျစ်ဝိုင် စပျစ်ဝိုင်နယ်မြေများကို ဖြတ်သန်းခြင်း ** ဘဝထဲကလူသား ** * စပျစ်သီးခူးသမား ** * စာစုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ * ** စပျစ်ဝိုင်နယ်...
စပျစ်ဝိုင်တွေရဲ့အကြောင်း စပျစ်သီးခူးသမား ဘဝထဲကလူသား ဘဝထဲကလူသား စပျစ်သီးခူးသမား (၂၀၀၃ ) ...
** * ဖဦးထုပ် ဎရေမှုတ် ၂၆ သို့ ** *
ဂျန်နဝါရီညများ စာစု (၁၂) ဖဦးထုပ် ဎရေမှုတ် ၂၆ သို့ ဖဦးထုပ် ဎရေမှုတ် ၂၆ သို့ ...
** အိုး ရှောင် ဇေ လီ ဇေ ** *
ပါရီပုံရိပ်များ အိုး ရှောင် ဇေ လီ ဇေ La Défense စံပြ ပါရီမြို့သစ် နောက်ခံထားလို့ တွေ့မြင်ရပါတဲ့ Arc de Triomphe အောင်ပွဲခံမု...
အယ်လ်ဗွီ လူဝီ ဗီတွန် (သို့မဟုတ်) မိတ်အင်ပြင်သစ် ခရီးဆောင် သေတ္တာ အကြောင်း
သမိုင်းထဲက လူသားများ ပါရီမြို့ကို ဖြတ်သန်းသွားသူများ အယ်လ်ဗွီ လူဝီ ဗီတွန် (သို့မဟုတ်) မိတ်အင်ပြင်သစ် ခရီးဆောင်သေတ္တာ အကြောင်း ...
Thème Voyages. Images de thèmes de Leontura. Fourni par Blogger.